"Bad Beat" Jumbo Poker Progressive Awards $ 217,055 na Red Rock Casino Resort & Spa - pisklak.net
“Bad Beat” Jumbo Poker Progressive Awards $ 217,055 na Red Rock Casino Resort & Spa
Caslọ Casinos ‘Jumbo Hold’ Em Poker “Bad Beat” na-aga n’ihu na Red Rock Casino na Mọnde, June 14, na ihe dịka 5: 19pm na-enye $ 217,055 ụgwọ zuru ezu. Na Monday, aka na-efu bụ quad 8s na aka mmeri bụ 8 elu ogologo iwepụ. Onye meriri meriri $ 43,387 na aka furu $ 75,928. Ndị egwuregwu niile nọ na tebụl ahụ meriri $ 1,356 onye ọ bụla, ebe ndị ọbịa niile na-egwu poker gafere ọdụ ụlọ poker na-egwu egwu n’oge ahụ meriri $ 557 ọ bụla, gụnyere ndị egwuregwu niile na tebụl mmeri. Egwuregwu abụọ ahụ jụrụ ka a ghara ịma aha ha.
Ejikọtara ya na ọnwa 3 gara aga, ọganihu atọ na-aga n’ihu nyere ndị egwuregwu ihe karịrị $ 590,000.
The Station Casinos Jumbo Hold ‘Em Poker “Bad Beat” Ọganihu dị nnọọ ibu ma dị mma karịa mgbe ọ bụla, ihe ọkpụkpọ mbak ga-amụba site na 40% na 70%. Dịka ọmụmaatụ, ndị egwuregwu niile ga-enweta opekata mpe $ 955 kama $ 557.
Aka “bukarịrị, nke ka mma” jumbo ọjọọ na-eto eto na-amalite na eze nwanyị anọ etinyere aka, jiri aka na-agbadata mgbe nile. “Onye emeriri” ya na aka tozuru oke merie 15% nke jackpot ebe aka mmeri ruru 10%. Ndị ọzọ fọdụrụnụ na tebụl n’oge kụrụ ahụ kewara 5% nke jackpot ebe ndị egwuregwu ndị ọzọ niile nọ n’ofe ụlọ Casinos poker ụlọ n’oge ahụ kewara 70% fọdụrụnụ.
Ihe karịrị $ 1 ​​nde ka e nyeworo site na “Station Casinos Jumbo Hold ‘Em Poker Bad Beat” kemgbe a ga-emepe na August.
Echiche Post: 114